कोरोनाले बचाउला पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सत्ता ? - Sankalpa Khabar
कोरोनाले बचाउला पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सत्ता ?
१४ बैशाख १५:११
काठमाडौं । कोरोना महामारीले सत्ता हल्लाउने मात्र हैन, बचाउने पनि रेछ भन्ने उदाहरण गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । गण्डकीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् । प्रस्तावबारे प्रदेश सभा सचिवालयमा छलफल जारी छ ।
तर, कोरोना भाइरस महामारीलाई देखाउँदै सत्तारुढ एमालेका सांसदले बैठक नै अवरुद्ध गरेका छन् । उनीहरूले सबै सांसदको पिसिआर परीक्षण नगरेसम्म बैठक बस्न नदिने भन्दै होहल्ला गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ अहिले अल्पमतमा छन् । तर, पनि एक दुई दिन सत्ता टिकाउन सकिन्छ कि भनेर कोरोनाको त्यान्द्रो समातेका छन् । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएर बैठकमा सहभागी हुँदा कसैको कोरोना परीक्षण गर्नु नपर्ने, तर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावबारे भइरहेको छलफलमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्ने एमाले सांसदको रुवाबासीलाई लिएर आलोचना हुन थालेको छ ।
आजको प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएपछि बुधबार मतदान हुने कार्यसूची तय भइसकेको छ । त्यो पनि एमालेकै सहमतिमा । तर, अहिले आएर बैठक अवरुद्ध गर्नु भनेको केन्द्र सरकारकै निर्देशनमा अन्य दललाई फकाउन गरिएको नाटक भएको बताउन थालिएको छ ।